Kpido: Mgbanwe | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga, akwagara m ngwa ngwa ahịa m na ebe a maara nke ọma na nke a nabatara (ọ bụghị Salesforce). Ndị otu m haziri ma mepụta mkpọsa ole na ole na anyị na-amalite ịmalite ịkwọ ụgbọ okporo ụzọ dị ukwuu… ruo mgbe ọdachi dakwasịrị. Ikpo okwu a na-eme nnukwu nkwalite ma kpochapụ ọtụtụ data ndị ahịa, gụnyere nke anyị. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere nkwekọrịta ọrụ ọrụ (SLA) nke na-ekwe nkwa oge, ọ nweghị nkwado ndabere
Fraịde, Machị 26, 2021 Fraịde, Machị 26, 2021 Douglas Karr
Otu ihe m na-akụziri ndị mmadụ na ahịa B2B bụ na ịzụ ahịa ka bụ nke onwe, ọbụlagodi mgbe gị na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ndị na-eme mkpebi na-echegbu onwe ha banyere ọrụ ha, nrụgide nrụgide ha, olu ọrụ ha, na ọbụna ịnụ ụtọ ọrụ ha kwa ụbọchị. Dịka ọrụ B2B ma ọ bụ onye na-eweta ngwaahịa, ahụmịhe nke iso nzukọ gị na-arụ ọrụ ga-akarị ihe mgbapụta n'ezie. Mgbe m malitere azụmahịa m, nke a juru m anya. M
Bizible na-enye gị ohere nyochaa arụmọrụ nke Adwords gị dabere na ntụgharị karịa ịpị aka, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ pụrụ iche na Salesforce iji tụọ arụmọrụ dabere na mkpọsa, otu mgbasa ozi, ọdịnaya mgbasa ozi, na ọkwa ọkwa. Ebe ọ bụ na Bizible na-arụ ọrụ na nsuso mkpọsa ugbu a na Google Analytics, ị nwere ike ịchụso ọtụtụ ọwa gafee ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe, ụgwọ, email na mkpọsa ndị ọzọ. Igodo atụmatụ ndị edepụtara na saịtị Bizible AdWords ROI - na - enye gị ohere igwu ala miri emi na AdWords